12 Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > 12 Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela
Zokuhamba Qeqesha Greece, Uloliwe ohamba eScotland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 25/02/2022)
Ukuba amatye etempile yamandulo ayenokuthetha, bebeya kuthetha ngempucuko yamandulo, uhlaselo, iinkcubeko, kunye nothando. the 12 Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela zigcinwe kakuhle kwaye zinomtsalane ngobuhle kunye nomfanekiso oqingqiweyo. Ukusuka kwiitempile zikaFaro eYiputa ukuya kwiitempile zamaBuddha kunye namaHindu eMzantsi-mpuma Asia, ezi tempile zindala zigugu zembali.
Loliwe Transport Ingaba I-Eco-Friendly Way To Travel. Eli nqaku ibhalwe ukuba afunde Train Travel yi Gcina A Isitimela, the Amatikiti eeTrayiti abiza amaxabiso aphantsi Emhlabeni.
1. Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela: Ibhotwe laseKnossos
Indawo yonqulo kunye neziko lobomi bezopolitiko kwixesha leBronze, Ibhotwe laseKnossos yenye yezona tempile zakudala kwihlabathi liphela. Itempile yaseKnossos yayiliziko lempucuko yamaMinoan eKrete. Ngaphezu, itempile yakudala yenye yezona tempile zigcinwe kakuhle ehlabathini.
Itempile yokuqala yaseKnossos yakhiwa kuyo 1900 BC phezu kwenduli, watshatyalaliswa yenye yeenyikima zomhlaba ezininzi eKrete. kunjalo, kanye emva koko kwakhiwa enye itempile yaza yatshatyalaliswa kugqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo. Ngaloo ndlela, itempile yaseKnossos emi namhlanje yi 3rd itempile evela 1375 BC. Itempile yaseKnossos yenye ye iindawo eziphezulu zembali geeks neentsomi zayo kwii-relics.
Ukulungiselela i-Stonehenge ngu 6,000 iminyaka, Amatye eGobekli kumzantsi-mpuma weTurkey kukholelwa ukuba ziintsalela zetempile yokuqala ekhoyo emhlabeni.. the 11,000 amatye eGobekli Tepe awayeneminyaka ubudala ayeyindawo yonqulo esendulini.
kunjalo, akukho zifunyaniso zokuhlaliswa kwabantu kulo mmandla, kodwa le ndawo yayiyeyona ndawo ibalulekileyo kuhambo lwabazingeli abaninzi abangabahambi nabaqokeleli. ke, itempile yaseGobekli Tepe yayisebenza njengendawo engcwele, ngentsingiselo yonqulo.
Rimini ku Verona Uqeqesha
ERoma ukuze Verona Uqeqesha
UFlorence Verona Uqeqesha
EVenice ku Verona Uqeqesha
3. Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela: UHagare Qim
Yenziwe nge 20 iithowuni megalith ilitye embindini, Itempile kaHagar Qim yenye yezona tempile zinomtsalane kwihlabathi liphela. Ngaloo ndlela, UHagare Qim ukwayitempile eqhelekileyo evela kwiMalta Prehistoric.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kwitempile kaHagar Qim ngumngxuma one-elliptical kwelinye lamagumbi amabini.. Ngosuku lokuqala lwehlobo, imitha yelanga idlula kulo mngxuma kwaye ikhanyise ibhloko yelitye. Unokundwendwela uHagare Qim kuhambo lwakho oluya eMalta, kwaye ndiyayithanda enye ye 12 uninzi lweetempile zakudala emhlabeni.
4. Iitempile zaMandulo Ehlabathini Lonke: Itempile yaseSeti
Igcinwe kakuhle kakhulu, Itempile kaSeti ivela kwinzala yeshumi elinesithoba. Itempile yaseSeti yindalo kaSeti kunye nonyana wakhe uRamses II. Uyise waqala indalo, ngoxa unyana wayegqibezela imihombiso neentendelezo ezijikeleze kuyo.
namhlanje, ungandwendwela iTempile yaseSeti, kwi uhambo losuku ukusuka eCairo. Xa ulapho kufuneka ubeke ingqalelo kwi-Abydos graffiti kwiindonga zetempile.
5. Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela: Itempile yeHypogeum
Eyona tempile yakudala yangaphantsi komhlaba yeyona tempile igcinwe kakuhle yeHypogeum eMalta. Itempile ephawulekayo 6,000 iminyaka ubudala, 3 amanqanaba itempile yamandulo yamagumbi adityanisiweyo.
Itempile yaseHypogeum kuqala yayiyindawo yonqulo nomthandazo, kodwa kamva itempile yamandulo yaguqulwa yaba yindawo yokungcwaba. Iindwendwe zinokuncoma imizobo ebomvu kwiindonga, imizobo yokuphela kwembali kwiziqithi zaseMalta. Ukwengeza, unokubona izinto ezikhethekileyo ezifunyenwe kwitempile kwiMyuziyam yaseValletta.
6. Itempile yaseLuxor
Njengoko uhamba kumagumbi etempile yaseLuxor, uhamba emva kumakhulu eminyaka yembali. Inyathelo ngalinye likukhokelela emva kwiminyaka kaRamses II, nobomi bonqulo baseYiputa yamandulo.
Itempile yaseLuxor inentsingiselo enkulu kwinkolo yamandulo yaseYiputa. Ngaphezu, kukwitempile yaseLuxor apho uThixo uAmon waphinda wazalwa khona ebudeni bokubekwa kukaFaro kwaminyaka le..
7. Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela: Stonehenge
Isangqa esikhulu samatye sesinye sembali eyimfihlakalo enkulu yehlabathi. I-Stonehenge iyazingca eWiltshire, ENgilani. Itsala amakhulukhulu eendwendwe ukuba ziyithande. Iingcali zembali kunye nehlabathi le-archeology zikholelwa ukuba i-druids yakha i-Stonehenge.
I-Stonehenge yayinokuba neenjongo zonqulo kwixesha langaphambili. Enye yemiqondiso lulungiselelo lwamatye kunye nenyaniso yokuba isikhumbuzo sijongene nokuphuma kwelanga. Ngelixa akukacaci ukuba la matye amakhulu aziswa njani kule ndawo ikhethekileyo eNgilani, I-Stonehenge yenye yezona tempile zidumileyo kwihlabathi jikelele.
8. Iitempile zaseGgantija
I-Ggantija yamandulo eMalta ivelele phakathi 12 uninzi lweetempile zakudala kwihlabathi jikelele. Oku kubulela kwinto yokuba iyitempile eneetempile ezimbini. Ngaphezu, Ggantija iitempile zafumana igama lazo ngenxa yamatye amakhulu azakhayo.
Ngaphezu, ukongeza ekutyeleleni enye yeetempile ezinkulu kwihlabathi liphela, ungahamba kwelona litye lesikhumbuzo lidala ehlabathini.
EMilan ukuya eTurin Uqeqesha
Lake Como eTurin Uqeqesha
Genoa eTurin Uqeqesha
Parma eTurin Uqeqesha
9. Iitempile zaMandulo Ehlabathini Lonke: Itempile ka Amada
Iitempile zaseYiputa zidume kwihlabathi jikelele ngobungakanani bazo obugqwesileyo, kunye noyilo. Iitempile zaseYiputa zaziwa njengezona tempile zintle kwihlabathi liphela. Ndiyabulela kwi-hieroglyphs kunye nemizobo kwiindonga, Itempile ka-Amada nayo intle.
Encinci, ukanti iTempile yaseAmada enomtsalane inemizobo entle eludongeni. Imibhalo yabelana ngeziganeko ezibalulekileyo kwimbali yaseYiputa njengohlaselo lwaseLybian eYiputa. ke, ukuba unqwenela ukutyelela iitempile ezindala zeLake Nasser, pakisha iibhegi zakho kwaye uye eNubia.
Basel ku Interlaken Uqeqesha
10. Itempile yaseMundeshwari Devi, Bihar
Eyona tempile indala esebenzayo yamaHindu ehlabathini, itempile yaseMundeshwari iseKaimur. Incinci, kodwa inomtsalane kwimikrolo yamatye, itempile luphawu lweNkosi Shiva kunye Shakti. Abatyeleli kwiTempile yaseMundeshwari banokubuka imizobo enomtsalane yexesha lamaGupta kunye nobomi basemva. 625 BC.
Itempile entle ikwiNduli yaseMundeshwari, apho kuye kwafunyanwa ezinye izinto ezibalulekileyo. Ukuba uthabathekile kunye nembali yobuHindu, Kuya kufuneka undwendwele iTempile yaseMundeshwari. Uya kufumanisa ngakumbi malunga nesimboli seNkosi uShiva kunye noShakti abahlala kunye kwindawo enye ekhethekileyo.
EVenice eRoma Uqeqesha
11. Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela: Borobudur Indonesia
Itempile yaseBorobudur eIndonesia idume ngokuba yeyona tempile inkulu yamaBhuda emhlabeni. Namhlanje amaBhuda amaninzi atyelela itempile yaseBorobudur kuhambo ngezonqulo kwisiqithi saseJava.
Xa undwendwela iTempile yaseBorobudur, uya kumangaliswa kukubona 56,000 cubic metres zelitye lentaba-mlilo elingwevu elenza le tempile yamaBhuda.
Offenburg ku Freiburg Uqeqesha
Stuttgart ku Freiburg Uqeqesha
Leipzig ku Freiburg Uqeqesha
Nuremberg ku Freiburg Uqeqesha
12. Itempile yaseHatshepsut
Ngcwele yeeNgcwele, itempile yaseHatshepsut ivela kwinkulungwane ye-18. UFaro Hatshepsut wakha itempile kumawa aseDeir El-Bahri, ngoko umphambili wetempile ujongene namawa’ i-landscape yenye yezona zinto zinomtsalane kwihlabathi liphela.
Itempile yakudala ivela kwixesha elitsha loBukumkani, kodwa ekuhambeni kweminyaka itempile yatshintsha injongo yayo ukusuka kwitempile ukuya kwikhaya loonongendi. UDeir El-Bahri uthetha “I-Monastery yaseMntla”, kwaye kukho necawe ngaphakathi kumhlaba weTempile Hatshepsut.
Munich ku Hallstatt Uqeqesha
Innsbruck ku Hallstatt Uqeqesha
Passau ku Hallstatt Uqeqesha
Rosenheim ku Hallstatt Uqeqesha
Thina Gcina A Isitimela Ndingakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kwezi 12 Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposti yethu yebhlog ethi "Iitempile ezili-12 zaMandulo Ehlabathini Lonke" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-ancient-temples-worldwide%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha i/fr ukuya ku/pl okanye/de kunye nezinye iilwimi.
Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
Ukubhiyozela uSuku loKumkani In The Netherlands (kaKing)
Uloliwe Travel Holland, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Ukuhamba eYurophu
Uhambo loLoliwe, Uloliwe kuhambo Italy, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
10 Iindlela zokudala zokuHamba
10 Iindawo zomtshato ezimangalisayo eYurophu
10 Iindlela zokuBhalisa iiMemori zokuHamba
12 IiNdawo zokuQalisa eziPhezulu kwihlabathi liphela
3 Iindlela ezilungileyo zokwenza i-Everest Base Camp
copyright © 2021 - Gcina A Isitimela, eAmsterdam, elamaDatshi